Likhuphuke Laya Kwabangu-314 Asebetholakele BeleCovid 19 eZimbabwe
Nhlangula 09, 2020
Umbiko wabogatsha lwezempilakahle
Abantu abangamatshumi amabili lasikhombisa abahlolwe izolo batholakala beleCovid 19, eZimbabwe sebengeze inani lasebetholakale belegcikwane leli laya kwabangamakhulu edlula amathathu-314. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zamaQuarantine Centers, abaphindele ekhaya bevela emazweni angomakhelwane agoqela eleSouth Africa, Botswana, Mozambique lamanye.
Abogatsha lwezempilakahle eZimbabwe babika ukuba asebehloliwe ukuba baleCovid 19 loba hatshi lokhu laqhamukayo elizweni, ngoMbimbitho lonyaka, sebezinkulungwane ezedlula amatshumi amahlanu-53,668. Asebesinde kulumkhuhlane lokhu bengamatshumi amane lasithupha-46, kwafa abane.
Emhlabeni jikelele abaleCoronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikombia-7,234,616, kuthi asebebulewe yileligcikwane, sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane-409,468, kodwa asebesinde kulumkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu-3,563,544 kubika abenhlanganiso eye Worldometer.
Emazweni awezwekazi le Africa asebebanjwe belegcikwane leli, sebezinkulungwane phose amakhulu amabili-195,875, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu-5,334, kwasinda inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisitshiyagalombili-86,068 kubikwa abenhlanganis eye Africa union.